Qodobbada hoose iyo Qodobbada Qodobbada Title (Optimization)
Sababta ay dadku u doortaan in ay ku daraan sawirada qoraalka waa inay xoojiyaan farriinta ku jirta iyaga oo soo jiidata dadka si ay u akhristaan. Frank Abagnale, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Maamulaha Guusha Macaamiil, ayaa sheegaya in aad marwalba xusuusato inaad ku darto sifooyinka hoose ee sawirrada aad u socoto. Astaamaha hoose iyo cinwaanka ayaa kor u qaadaya qoraalka ku filan mashiinka raadinta caarada si ay u kalliftaan inay kor u qaadaan muuqaalkaaga. Taariikhda hoose waxay soo koobeysaa wax walba oo aad ku aragto sawir ahaan ereyada - informacion sobre las camaras fotograficas.
Subaxda iyo Qoraallada Title
Subka iyo cinwaanka tixraaca ma aha farsamooyinka farsamada oo kaliya oo ku wargelinaya mawduuca iyo shaqada muuqaalka boggaas. Akhristayaasha shaashadu waxay sidoo kale ku tiirsan yihiin qoraalka hoose si ay u sharaxaan dadka indhoolaha ah iyo indhoolayaasha naafada ah waxa sawirku dhan yahay.
Sidaa darteed, sawirada oo dhan waa inay ku jiraan astaanta hoose. Ma aha oo kaliya dhisaan SEO-gaaga laakiin sidoo kale waxay caawiyaan dadka indha indhaynaya si ay u fahmaan isticmaalka sawirka boostada. Sifooyinka Titleka ma aha in ay ku jiraan maqaaladaha, laakiin waxay ku caddeyn karaan faa'iido xaaladaha qaarkood. Si kastaba ha noqotee, iyaga oo ka tagaya ma waxyeelayn doono maqaalkaaga
Dadka isticmaala sawirrada si ay u kordhiyaan racfaanka muuqaalka boostada kaliya waa inay joojiyaan sameynta sidaas sababtu waxay tahay inay tahay inay ku jiraan CSS oo aan ku jirin qoraallada HTML. in aad beddesho sawirada, isticmaal nalooc lahayn, taas oo ka dhigaysa sharaxaadda faaruq ah. Haddii akhristayaasha shaashadu ay kudhacayaan muuqaalkan muuqaalka hoose, waxay iska dhaafi doonaan.
Sub Text iyo SEO
Google ayaa ku adkeysanaya in isticmaalayaasheeda ay tahay in ay abuuraan qoraalo hoose oo sawiradooda ah tan iyo markii ay qiimo badan ku yeelato iyaga. Tusaale ahaan, sida laga soo xigtay falanqaynta faahfaahinta Yoast SEO, waa inaad haysataa ugu yaraan hal sawir leh qodob hoose oo diiradda saaraya erayga muhiimka ah ama weedh kaas oo kordhin doona tayada maqaalkaaga. Si kastaba ha noqotee, xitaa marka dadka isticmaala ay sidaas sameeyaan, ma ahan inay ku falanqeeyaan ereyga muhiimka ah dhammaan tagsiyada hoose. Qodobbada hoose iyo cinwaanka ee ku jira ereyada muhiimka ah waa in ay gacanta ku galaan iyagoo leh tayo sarre leh iyo kuwo la xidhiidha.
Haddii uu jiro erayo muhiim ah oo ka caawin kara dadka inay helaan waxyaabaha ku jira sawirka, xusuuso inaad ku darto qoraalka hoose.
Sifooyinka hoose iyo Title ee WordPress
Meel kale oo aad ku isticmaali kartid astaanta iyo cinwaanka cinwaanada waxay ku jiraan sawirada mid ka mid ah ku dhejinaya boggooda WordPress. WordPress wuxuu ku dhejiyaa tixraaca cinwaanka ah astaanta caadiga ah haddii mulkiiluhu uu iloobo inuu isku soo lifaaqo sawiradiisa. Waxay ku daabacdaa qoraalka cinwaanka sharaxaadda cinwaanka waxayna ku dhajisaa sifooyinka hoose. Way ka fiicantahay heysashada sifo hoose oo faaruq ah, laakiin wali way daciifineysaa hagaajinta helitaanka goobtaada.
Waqti u qaado si aad u abuurto astaanta saxda ah oo aad ku darto qoraalada sawiradaada. Interface WordPress waxay kuu ogolaaneysaa inaad gacanta ku darto qoraal hoosta ah adoo gujinaya sawirka oo dooro edit.
Habka keliya ee muuqaalka SEO ah ayaa ka faa'iideysan kara maqaalkaaga iyo xaashiyooyinka xiga waa haddii aad hesho faahfaahin yar oo sax ah. Intaa waxaa dheer, inaadan ka tagi doonin dadka aragga naafada ah mawduucaaga